Amasheya ka-Hehe, akumema ukuthi ubambe iqhaza kwi-2021 China International Textile Fabrics and Accessories (Autumn and Winter) Expo!
Kusukela ngo-Okthoba 9 kuya ku-11, 2021, i-2021 China International Textile Fabrics and Accessories (Autumn and Winter) Expo izobanjelwa eShanghai National Convention and Exhibition Centre. Hehe Stock Booth No. 2.2 IHolo K72! Uyemukelwa abangane abasha nabadala ukuvakashela idokodo! Iphrofayili yenkampani Jiangsu ...
Ifilimu lokunamathela elishisayo le-H & H: Sizoletha umkhosi wendabuko waseChina-Mid-Autumn Festival
UMkhosi Waphakathi Nokwindla, owaziwa nangokuthi uMkhosi Wenyanga. Kusukela ezikhathini zasendulo, uMkhosi Waphakathi Nokwindla ubulokhu unamasiko esintu njengokukhonza inyanga, ukubabaza inyanga, ukudla amakhekhe enyanga, ukudlala ngezibani, ukubabaza izimbali ze-osmanthus, nokuphuza iwayini le-osmanthus. Sizokwenza ukungenisa ChinaR ...
Ukukhethwa Kwefilimu Yokunamathisela Eshisayo Ye-Adhesive and Case Description
Njengokunamathela okubaluleke kakhulu kwezimboni, ifilimu lokunamathisela elishisayo lidlala indima ebalulekile kuzo zonke izizinda zokuphila. Ifilimu lokunamathisela elishisayo lisetshenziselwa ukunamathela, futhi umsebenzi walo oyinhloko ukuqedela ukuhlanganiswa komkhiqizo. Ngaphezu kokuhlanganiswa kokuhlanganiswa komkhiqizo, futhi ...
Izinzuzo ze-Eva Hot Melt Adhesive Film
Ifilimu lokunamathisela elishisayo elenziwe yi-Ethylene Vinyl Acetate Copolymer efanele ukubopha izindwangu, izindwangu, izinto zezicathulo, i-aluminium foil i-Mylar, i-PET, i-PP, i-EVA foam tincetu, isikhumba, izindwangu ezingalukiwe, izinkuni, iphepha, njll. Ayinalo iphepha lokukhishwa eletha intengo ephansi kakhulu kunaleyo w ...
Ingabe impahla yesipanji ingahlanganiswa nokunamathisela okushisayo?
Noma nini lapho sikhuluma ngezipanji, ngikholwa ukuthi wonke umuntu ujwayelene naso. Isipanji yinto ejwayelekile empilweni yansuku zonke, futhi kunamathuba amaningi okuthi wonke umuntu ahlangane nayo, futhi abanye abantu bayayisebenzisa nsuku zonke. Imikhiqizo eminingi yesipanji ayizona nje izinto zokusetshenziswa zesiponji ezimsulwa, kodwa isakhi ...
Ithonya lokushisa okuphezulu komshini ohlangene ngomphumela wokusetshenziswa kwe-hot melt adhesive omentum
Sonke siyazi ukuthi ifilimu yokunamathisela eshisayo ayishisi ekamelweni lokushisa. Uma isetshenziswa ezintweni ezihlanganayo, idinga ukuncibilika ngokucindezela okushisa okushisa okuphezulu ngaphambi kokuba ibe viscous! Ubukhulu obuthathu obubaluleke kakhulu kuyo yonke inqubo ehlanganisiwe: izinga lokushisa, isikhathi, kanye ne-pre ...
Ubuhle nobubi bokusebenzisa ifilimu lokunamathisela elishisayo
1. Ukuphefumula kahle Labo abasebenzise ifilimu lokunamathela elishisayo lokuhlanganisa izinto kufanele bazi ukuthi ukungena kwomoya kwefilimu yokunamathisela eshisayo kuncane kakhulu. Okokusebenza noma izimboni ezidinga ukungena komoya okuphezulu, amafilimu wokunamathisela ashisayo empeleni awafanelekile. Noma kunjalo, hot-melt ...
Ungayisebenzisa kanjani ifilimu yokunamathisela eshisayo?
Ungayisebenzisa kanjani ifilimu yokunamathisela eshisayo? Mayelana nokusetshenziswa kwe-hot melt adhesive film, ingahlukaniswa ngezimo ezimbili. Enye ukusetshenziswa kokukhiqizwa okungekho ngobuningi: njengokusebenzisa ezindaweni ezincane, nokusetshenziswa ezitolo ezincane ezinendawo yokucubungula (njengamakhetheni Izitolo); isimo sesibili ...
Ifilimu lokunamathela elishisayo le-H & H: Ukulayisha okugadiwe ngefekthri
Njengoba bekunecala lapho ikhabinethi ibingenazo zonke izimpahla ku-oda, ikhasimende lisicelile ukuthi siligcwalise ngalesi sikhathi, lacela nokuthi sihlele uhlelo oluthile lokulayisha ikhabethe. Ungawahlela kanjani amabhokisi ngokunengqondo ukuze wandise indima yekhabhinethi futhi ulayishe izimpahla eziningi. Ngaphambi ...
Ngabe ifilimu lokunamathisela elishisayo elincibilikisayo nokuzinamathisela kuyinto yokunamathisela efanayo?
Ngabe ifilimu yokunamathisela eshisayo eshisayo nokuzinamathisela kuyinto yokunamathisela efanayo? Noma ngabe ifilimu yokunamathisela eshisayo ne-self-adhesive ingumkhiqizo ofanayo, lo mbuzo ubukeka ukhathaze abantu abaningi. Lapha ngingakutshela ngokusobala ukuthi ifilimu elincibilikayo elishisayo lokuzibambela akuyona into efanayo yokunamathela. W ...
Ifilimu lokunamathisela elishisayo le-H & H: Ukuhlaziywa kokukhuphuka kwentengo yezinto zokusetshenziswa ze-TPU ngo-2021
U-2021 unyaka ongavamile we-TPU. Intengo yezinto zokusetshenziswa inyukile, okwenza intengo ye-TPU inyuke kakhulu. Ekuqaleni kukaMashi, intengo yenyukele eqophelweni eliphezulu emlandweni eminyakeni emine edlule. Uhlangothi lokufunwa lubhekane nokuxakaniseka kwempahla eluhlaza enentengo ephezulu. I-cal enengqondo ...
Incazelo eningiliziwe yokusetshenziswa kwe-hot melt adhesive film in the composite of carpet and mat
Okhaphethi namata waphansi kuyizinto ezivamile ezimpilweni zethu, futhi zisetshenziswe kakhulu emahhotela nasemakhaya. Ukusetshenziswa kwamata waphansi akulula kuphela, kepha futhi kungagcina inhlanzeko yasendlini isikhathi eside. Ngakho-ke, amakhaya namahhotela ajwayele ukusebenzisa amacansi aphansi njengokuhlanza nokwenza ngcono ubuhle ...